Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyo Kala Duwan oo Kadhacay Ogadenia + Faahfaahin.
Tacadiyo Kala Duwan oo Kadhacay Ogadenia + Faahfaahin.
Posted by Dulmane	/ November 12, 2016
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) ayaa sheegaya tacadiyo baahsan oo ciidanka Gumaysigu ugaysteen dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia.
Tacadiyadan oo isugu jira Dil, Jidh-dil, Xidhay iyo Dhac ayaa lagu soo waramayaa in ay kadhaceen meelo badan oo Ogadenia ah waxayna udhaceen sidan.
Markay taariikhdu ahayd 7/11/16 Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob waxay ciidanka bahalka ah ee Gumaysigu ku dileen 2 wiil oo dhalin yaro ah halka 1 wiil oo kalana ay gaadhsiiyeen dhaawac culus, wiilasha la dilay ayaa magac yadooda lagu sheegay Ina Maxamad Yuusuf iyo Ina Cabdi Wahaab. Sidoo kale waxay ciidanka wayaanuhu dhaawaceen wiil magiciisa lagu soo koobay Ina Cabdi.
Isla taariikhdan 7/11/16 ayaa Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob waxaa lagu dhaawacay wiil dhalin yara ah oo lagu magacaabo Yuusuf Maxamad Gaas.
Warku waxa kaloo uu sheegayaa in 8/11/16 Qaruud oo Dagmada Iimaybari katirsan in ay ciidamada wayaanuhu ku xidheen
1 fardowsa maxamad xassan
3 axmad qorane nuur
4 axmad muxumad ciilmooge
5 axmad gorad.
8/11/16 Gudhis oo Dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle katirsan waxay ciidanka cadawgu ku xidheen Cabdi Muqadin Raage. Sidoo kale 8/11/16 Shiniile oo Dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan waxay ciidanka cadawgu ku xidheen muwaadiniinta kala ah bashiir daahir iyo maxamad axmad qorane.